March 2014 - Page 96 of 96 - iftineducation.com
Dumarka iyo ragga keebaa u jilicsan jacaylka? (warbixin xiiso badan)
aadan21 / March 1, 2014
iftineducation.com – Jacaylku dumarka iyo raga keebuu ku badanyahay? Dumarka iyo ragga keebaa u jilicsan jacaylka?. Dumarka iyo ragga keebaa jacayl dhab ah qaadsiin kara mid ka kale? Horta jacaylka ragga iyo ka dumarku waa wax aad u kala fog laakiin labaduba wax way jeclaadaan Ninka raga ahi qofka dumarka ah ee uu jeclaado lagama yaabo inay niyadiisa ka baxdo waligii, ama uu…
Daawo Sawirada Xaaska Madaxweyne Obama oo laga qaadi wayay salaanta iyo Obama oo ka xanaaqay
iftineducation.com – Warbaahinta Dalka Talyaaniga ayaa soo bandhigtay Sawiro muujinaya xaaska madaxweyne Obama oo slaaanta laga qaadi waayay, waxaana sawirkan uu dhaliyay buuq badan. Ra’isul wasaarihii hore ee Dalka Talyaaniga Silvo-Ber-leskooni ayaa salaanta ka diiday inuu ka qaado marwada madaxweynaha Mareykanka Brack Obama. Silvo-Ber-leskooni ayaa sheegay in sababta uu uga diiday salaanta Xaaska madaxweyne Obama ay tahay isagoo caadeysan inuu salaamo…
Dadka Jirkooda Qurxiyo Iyo Dadka Caqligooda Qurxiyo Farqi Intee La’eg Ayaa U Dhaxeeyo (Akhriso)
iftineducation.com – Guud ahaan dadka waxay u kala qaybsamaan dad ku mashquulsan yihiin jidhkooda, halka qaar kalena ay ku mashquulsan yihiin caqligooda sidii ay u horumarin lahaayeen. Afkaarta ay kala aaminsan yihiin ayaa ah, in qaarkood ay isku buuxiyaan dhar iyo xarago, halka qaarkoodna ay aaminsan yihiin inuu waxa maskaxdooda ku jiraan meel kasta ku mari karo. Dadka caqligooda qurxiya Dadkan…